Isiokwu nke Isaac Pellerin Martech Zone |
Edemede site na Isaac Pellerin
Ebu ụzọ kpọbata m na ReadyTalk mgbe m nwụsịrị webinar na GoToWebinar. Enwere m ndị ọbịa 3 na ngosi sitere na Denver, San Francisco, na London. Ihe kariri ndi mmadu 200 nwere obi oma na ndi amara ekweghi ebe ahu ka anyi na-egbu oge na ntughari anya. Ya mere, achọrọ m ịchọta onye na-eweta ọrụ nwere ikike iji kwado mkpa nke ndị na-eweta ma ndị bịara. Nke a bụ ebe ReadyTalk karịrị. Ahụmịhe Onye Nlekọta: A ReadyTalk Webinar